XOG:Xiriirka Siyaasadeed Ee Farmaajo Iyo Dr. Gaas Wuxuu Daaqada Ka Saaray Ballamo Iyo Isbahaysiyo Hore | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
XOG:Xiriirka Siyaasadeed Ee Farmaajo Iyo Dr. Gaas Wuxuu Daaqada Ka Saaray Ballamo Iyo Isbahaysiyo Hore
Khudbadaha Madaxweyne Farmaajo uu ka jeedinayo golayaasha la isgu yimaado ee Puntland ayaa waxaa ka soo dhex iftiimaya Siyaasaddaha la barafeeyey ee u dhexeeya Madaxweynaha DFS Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Madaxweynaha DGPL C/weli Maxamed Cali Gaas.
9kii Jan. 2019 oo Madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku tegay magaaladda Qardho ayuu si weyn amaan ugu jeediyey Madaxweyne C/weli Maxamed Cali Gaas oo uu ku tilmaamay in uu waxqabad aan la dhayalsan karin ka muuiyey Puntland mudadii uu hogaanka gobolkan hayey.
Mashaariicda dhismaha jidadka magaalooyinka Puntland ayaa ugu weyneyd meelaha uu farta uu ku fiiqay, balse Madaxweyne Farmaajo ma soo hadal qaadin in Mashaariicdan ay fuliyeen hay’addaha QM, barnaamijka ay ugu magic dareen loogu magac darayJPLG.
Waxaa kale oo Madaxweyne Farmaajo amaanta Dr. Gaas raaciyey in uu wax ka qabtay jidka isku xira Garoowe iyo Qardho, balse Madaxweyne Farmaajo amaantiisa wuxuu la dhinac maray in dadweynaha reer Puntland ay bixiyeen kharashka ku baxay dhismaha Buundooyinka laga hirgeliyey goobihii ay daadadku la tageen.
Madaxweyne Farmaajo oo magaalada Garoowe ka sheegay in ay maamulkiisu xoogga saari doono dimoqraadiyadda iyo in soomaaliya ay ka hirgasho doorasho hal qof iyo cod ah, ayaan sheegin in Madaxweyne Gaas ku guul darreystay in Puntland barnaamijka Dimoqraadiyada ka hirgeliyo, maadaama ay balamahiisa ka mid aheyd.
Siyaasaddaha Farmaajo iyo Gaas dhinacee isaga soo dhowaadeen?
Waxaa jira hadal hayn ay dadka qaarkiis ku sheegeen in dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay si weyn dhinaca siyaasadda isaga soo dhowaadeen Madaxweynaha DFS Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Madaxweynaha DGPL Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas.
Dadka siyaasadaha falanqeeya ayaa sheega in Dr. Gaas uu quful saaray albaabdii siyaasadeed ee wakhtiyadii hore uu ku lugeyn jiray isla markaasna uu door biday in uu albaabka Dowladda Federaalka Soomaalliya ka daawado filimada siyaasadeed ee dhex jibaaxaya xafiisyadda Dowladda Federaalka.
Waxaa arrintaasi soo af-jartay Isbahaysigii Madaxweynayaasha Goboladda oo uu Dr. Gaas Guddoomiyaha ka ahaa, waxay kaloo daaqada ka saartay xiriirkii dhowaa ee dowladda Imaaraadka Carabta uu Maamulka Gaas la wadaagay.
Albaabka cusub ee uu Dr. Gaas uu ka salaameen Madaxweyne Farmaajo ayaa balaqaya xiriir dhow oo u bilowda dowladda Qadar iyo Puntland, kaasoo dowladda Qadar ay ugu ballan qaaday in ay Puntland ka hirgelin doonto dhismaha deked casri ah oo aad uga weyn tii ay dowladda Imaaraadku 30ka sanadood ku kireysatay, taasina waxay fogeyneysaa khilaafkii dowladdaha Khaliijka ee uu horkacayey dalka Boqortooyada Sacuudi Carabaya.
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoonaan karo oo laga helayo siyaasiyiin ka ag dhow Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa sheegaya in Dowladda Qadar u qorsheysay Malaayiin Dollar oloalaha doorashada Madaxweynanimada Puntland taasoo la maleynayo in ay ku kharash gareyn doonto Madaxweyne hadda tallada haya.
Warar u dhow Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda Farmaajo ay si weyn raali uga tahay isbedelka siyaasadeed ee Puntland ay kula jaanqaaday Siyaasadda DFS, sidaas awgeedna uu Dr. Gaas mudan yahay in kursiga lagu ilaaliyo wixii ka danbeeya 2018-ka oo ah wakhti mudeedka xil haynta Dr. Gaas.
Mucaaradka Farmaajo waa mucaaradka Puntland.
Tallaaboyinka siyaasadeed ee hadda ka dhex socda Federaalka iyo Puntland ayaa u muuqda mid ay kaga mideysan yihiin Siyaasiyiinta Mucaaradka oo wakhtiyadii hore tiir ay qabsadaan ka dhigan jiray Maamuladda Goboladda balse hadda ay sii qaadaneyso duufaanta siyaasadeed.
Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo oo habeen ka mid ah wakhtigii uu Puntland joogay ku caweeyey magaalada Qardho ayaa hadal hayanta ugu badan ee laga helayo falanqeynta siyaasada ay sheegayaan inuu qorsheynayo sidii uu meel isaga qufuli lahaa Siyaasiga Cumar C/rashiid oo uu rumeysan yahay in uu dhabar wareen ku hayo siyaasadda dowladda Federaalka, taas bedelkeedna uu Siyaasiyiin tiro badan ee deegaamada Puntland ka soo jeeda quluubtooda kasbado.
Aragtida Madaxweyne Farmaajo iyo Nidaamka Federaalka.
Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ayaan marna soo hadal qaadin nidaamka Federaalka ee dowlada Soomaaliya ku dhisan tahay, wuxuuse dhiiri geliyey nidaamka dimoqraadiyadda oo uu sheegay in laga wada shaqeeyo sidii sanadka 2020 ay u qabsoomi laheyd doorasho xor ah oo soomaaliya ka dhacda isla markaasna ay ku tartami doonaan Xisbiyo siyaasadeed, dadweynuhuna ay codkooda xor ugu noqonayaan xisbiga iyo hogaamiyaha ay noloshadooda ku aamini karaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa wefdigiisa ka mid ahaa Siyaasiyiin ay ka mid yihiin Salaad Cali Jeelle iyo Tarsan oo Labaduba gudaha Puntland ka waday olole Xisbiyeed laga dhex hirgeliyo gudaha Puntland.
Siyaasiyiin badan ayaa waxay cabsi ka qabaan in Maamul Goboleedka Puntland uu siyaasad ahaan wajahi doono siyaasad ugub ah oo ka aragti duwan tan Federaaliisamka haddii si laablakac ah loo taageero aragti ka duwan Federaaliisam, waxaana jira shaki soo xoogeysanaya oo laga qabo in maamulka C/weli uu lugaha la galo siyaasad ka duwan tii ay Puntland ku dhisneyd.
Arrintu siday doonto ha noqotee, heshiiska siyaasadeed ee cusub ee u dhexeeya Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxweynaha DGPL ayaa wuxuu meesha ka saarayaa shakigii laga qabay Madaxweynaha DGPL uu ku hortaagnaa in Madaxweyne Farmaajo uusan noqon mid yeesha awood siyaasadeed oo buuran.